उम्मेद्धार छान्न कांग्रेसभित्र सकस, रामचन्द्र र शशांक राति नै बैठक छाडेर बाहिरिए – YesKathmandu.com
मङ्गलबार ०८, जेठ २०७५
उम्मेद्धार छान्न कांग्रेसभित्र सकस, रामचन्द्र र शशांक राति नै बैठक छाडेर बाहिरिए
आइतबार १८, भदौ २०७४
काठमाडौं । प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा संस्थापन पक्षले एकलौटी उम्मेद्धार चयन गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसको पौडेल समुह राति नै बैठकबाट बाहिरिएको छ । शनिवार राति उम्मेद्धारको अन्तिम नामावली टुंग्याउन सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमा बैठक डाकेको थिए ।
बैठकमा नेता विमलेन्द्र निधिले २ नम्वर प्रदेशका उम्मेद्धारहरुको नामावली पेश गरेका थिए । निधिले पेश गरेको नामावलीप्रति कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाले असहमति जनाए । दुई दिनअघि कोइराला र निधि बसेर टुंग्याएको नामावलीमा फेरबदल गरिएपछि महामन्त्री कोइराला रुष्ट बनेका हुन् ।
शनिवार नै उम्मेद्धारको अन्तिम टुंगो लगाउन कांग्रेसले गृहकार्य गरेको थियो । तर पौडेल र कोइरालाको असहमतिपछि मध्यरातसम्म छलफल हँदा पनि उम्मेद्धारी टुंगिन सकेन । निधिले पेश गरेको सुचिमा फेरबदल गर्न देउवाले नमानेपछि राति नै पौडेल र कोइराला बालुवाटारबाट बाहिरिएको स्रोतले बताएको छ ।
प्रदेश नम्वर २ मा पहिलो हुने उद्घोष गरेको नेपाली कांग्रेस उम्मेद्धारको विवादमा फसेको छ । संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको भन्दै पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको छ । असन्तुष्ट पक्षलाई समेटनतिर भन्दा थिच्नतिर देउवा लागेको आरोप पौडेल पक्षले लगाएको छ । देउवाले शनिवार साँझ पौडल, कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव र निधिलाई बालुवाटार बोलाएका थिए ।
माओवादी केन्द्रको रोजाई सत्तामा कांग्रेस, चुनावमा मधेस केन्द्रीत दल, मुकाममा वीरगञ्ज
देउवा,पौडेल र गच्छादार तीनै जनालाई प्रतिस्पर्धीले उछिने
नुवाकोट जिल्ला निर्वाचन कार्यलय अगाडि बम फेला
म कहीँ कतैबाट पोखिएर उम्मेदवार बनेको होइन :-पोखरेल
कठै वरा कांग्रेस ! माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्य पो उम्मेद्धार बनायो
चौतारीमा को को चुनिए ?
कांग्रेसबाट उपसभामुखमा पुष्पा भूसाल, सत्तापक्षीय दलमा अन्यौल
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्लै भेट्न कांग्रेसका तीन नेतामाथी देउवाको प्रतिबन्ध
खोई मेरो कुर्सीको ग्यारेन्टी ?
मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा आजको बालुवाटार बैठक पनि बिना निष्कर्ष टुंगियो
१० लाख घुससहित समातिए वैदेशिक रोजगार विभागका शाखा अधिकृत
वाम गठबन्धनबाट कोको बन्दैछन प्रदेश मुख्यमन्त्री ? यस्ता छन् दलहरुका दावी
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाँदैनौ, बाहिरबाट समर्थन दिन्छौ
७५० नेपाली नागरिकको नागरिकता भारतीय नागरिकको अधिनमा
डीआईजी चन्दलाई प्रहरी महानीरिक्षक बनाउने सरकारको निर्णय सर्वाेच्चद्धारा बदर, सिलवाललाई बाटो खुल्यो
पुरानै पार्टीको पुनरावृत्ति नगर्ने – डा भट्टराई
एमालेका यी चर्चित नेत्रीहरु सांसद बन्ने पक्का (को–को बन्दैछन् सांसद सुचिसहित)